Linux Nkesa na ngwugwu Manager Guix 1.2 Emeputala | Site na Linux
Ndi oru onye njikwa ngwugwu GNU Guix 1.2 na ngwa nkesa GNU / Linux wuru na ntọala a.
Ihe nkesa nwere ike arụnyere dị ka standalone sistemụ na sistemụ arụmọrụ, na akpa na ngwaike akụrụngwa, ọ nwere ike ịgba ọsọ na nkesa GNU / Linux arụnyere, na-eme dị ka ikpo okwu iji mejuputa ngwa.
Onye ọrụ nwere ọrụ dị ka ịdabere na-aza ajụjụ, na-arụ ọrụ na-enweghị mgbọrọgwụ, rollback na aga na nsụgharị bụrụ na nsogbu, nhazi nhazi, cloning gburugburu (na-ekepụta ezigbo nnomi nke ngwanrọ ngwanrọ na kọmputa ndị ọzọ), wdg.
Ọ bara uru ikwu nke ahụ na njikwa ngwugwu GNU Guix dabeere ọrụ nke oru ngo Nix na, na mgbakwunye na nke ahụkarị ọrụ nchịkọta ngwugwu, na-akwado atụmatụ dịka ịme mmelite azụmahịa, ikike ịlaghachi mmelite, ịrụ ọrụ na-enwetaghị ikike ikike, nkwado maka profaịlụ jikọtara ndị ọrụ n'otu n'otu, ikike ịwụnye ọtụtụ nsụgharị nke mmemme, ndị na-ekpofu ahịhịa (njirimara na mwepụ nke ejibeghi nsụgharị nke nchịkọta).
Iji kọwaa ngwa wuo scripts na iwu nkwakọ ngwaahịa, a na-atụ aro ka ị jiri asụsụ ngalaba dị elu akọwapụtara aha ngalaba Guile Scheme API components, nke na-ekwe ka arụ ọrụ njikwa ngwugwu niile rụọ ọrụ na atụmatụ mmemme arụmọrụ.
1 Akwụkwọ ọgụgụ isi nke Guix 1.2
2 Budata Guix 1.2
Akwụkwọ ọgụgụ isi nke Guix 1.2
Na ụdị ọhụrụ a maka njikwa ihe ngwugwu ikike iji nyochaa ebe nchekwa ngwugwu emejuputara "Guix dọkpụrụ" na iwu ndị yiri ya ugbu a na-enyocha koodu nzuzo nke ewepụtara site na ebe nchekwa ahụ, na-egbochi ịbanye na-enweghị ikike site na nchekwa ahụ.
Ọzọkwakwukwara iwu "Guix git authenticate", nke pna-enye ohere iji nyocha usoro akwadoro maka nchekwa ego git.
Iwu "Guix sere" na "guix system reconfigure" na-emejuputa iji chọpụta ma gbochie usoro nlọghachi azụ na nsụgharị ochie iji gbochie mmemme ịlaghachi na nsụgharị ndị na-adịghị ike iji jiri nsogbu ndị dị na nsụgharị dị ugbu a.
Agbakwunyere ọrụ mmelite na-akpaghị aka nke na-eme "guix pull" na "guix system reconfigure" site n'oge ruo n'oge iji mee ka sistemụ ahụ dị ọhụrụ, yana nkwado maka SHA-3 na BLAKE2 crypto hashes na usoro mkpokọta na API.
Ihe eji eme ihe nhazi ihe esiriwanye na edemede iji wụnye Guix na gburugburu ebe obibi ndị ọzọ.
Anyị nwekwara ike ịchọta ụdị ọnọdụ paging ọhụụ na ọchụchọ guix, usoro guix na iwu ndị yiri ya.
E wezụga nke ahụ arụ ọrụ na mbenata oge mkpokọta na oriri nke ihe onwunwe mgbe ị na-eme iwu ahụ "guix pull" na-erite uru nke nchịkọta ọhụrụ ewepụtara na Guile 3.0.4 na nke ahụ agbakwunye ọrụ hurd-vm na usoro Guix GNU / Hurd cross-chịkọtara nke na-agba ọsọ dị ka igwe mebere na GNU / Linux.
Gbakwunyere atọ nhọrọ ngwugwu mgbanwe ọhụrụ "–With-debug-info", "–with-c-toolchain" na "-nweghị nnwale".
Iwu "Guix pack -RR" na-agbakwunye nkwado maka engine "fakechroot" iji mepụta ngwungwu ndị nwere ike ibugharị enwere ike ịgba ọsọ na gburugburu na-enweghị Guix.
Agbakwunyere "gnu image" modul na "guix system disk-image –image-type = Ydị" iwu iji rụọ ọrụ na onyonyo sistemụ na ISO-9660, qcow2 nwere akụkụ nke ext4, ext2 na nhọrọ Hurd, wdg.
Ọ na-kwuru na arụ ọrụ sistemụ ọhụrụ agbakwunyere lxqt, udev-laws, hostapd, zram, autossh, webssh, ganeti, gmnisrv, guix-build-nhazi, guix-wuot-nhazi-elekọta gị, guix-build-nhazi-kwụ n'ahịrị-ewuli, hurd-console, hurd-getty, hurd-vm, rshiny.
Nakwa nsụgharị nke emelitere nke mmemme na Ngwunye 3652, 1999 gbakwunyere nchịkọta ọhụrụ. Gụnyere nsụgharị nke emelitere GNOME 3.34.2, MATE 1.24.1, ihe ọmụma 0.24.2, xfce 4.14.2, xorg-server 1.20.8, bash 5.0.16, gcc 10.2.0, gimp 2.10.22, glibc 2.31, gaa 1.14.10 , inkscape 1.0.1, libreoffice 6.4.6.2, Linux-libre 5.9.3, openjdk 14.0, eke 3.8.2, rust 1.46.0.
Ọzọ nke mgbanwe kwuru:
Opekempe ọnụọgụ abụọ e setịpụrụ maka x86_64 na i686 ụkpụrụ ụlọ e belatara ruo 60MB.
Agbakwunyere nkwado maka FS NTFS na eserese eserese.
Ọrụ amalitela na ntinye nke nkwado GNU / Hurd.
Budata Guix 1.2
N'ikpeazụ maka ndị nwere mmasị ịnwale njikwa ngwugwu ma ọ bụ nkesa, ị nwere ike ịlele nkọwa echichi na / ma ọ bụ chọta ihe oyiyi maka nbudata, Na njikọ na-esonụ.
Ihe oyiyi maka ntinye na Flash Flash (489 MB) na iji ha eme ihe na sistemụ arụmọrụ (479 MB). Work akwado on i686, x86_64, armv7, na aarch64 architectures.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Emeelarị Linux nkesa na njikwa ngwungwu Guix 1.2